चिन्ताको लागि सीबीडी तेल - तपाईंले जान्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण चीजहरू - व्यक्तिगत विकास क्याफे
पोस्ट व्यवस्थापक | अक्टोबर 11, 2019 | औषधी भांग, सीबीडी |0|
1 CBD के हो र तपाइँ चिंताको लागि CBD तेल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
2 सीबीडी तेलको बारेमा
2.1 कसरी CBD चिन्ताका साथ व्यक्तिहरूको लागि काम गर्दछ?
2.2 कसरी CBD तेल उपभोग गर्ने?
2.2.1 के CBD तेल र धूम्रपान मारिजुआना उपभोक्ताले समान प्रभावहरू उत्पन्न गर्दछ?
2.2.2 यहाँ सीबीडी उत्पादनहरूका केही स्टकवादीहरू छन्।
जति धेरै र अधिक रिपोर्टहरूले सुझाव दिन्छ कि CBD मिर्गी र अन्य मानसिक समस्याहरूको उपचारमा फाइदाजनक छ, के तपाईं चिन्ताको लागि CBD तेल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
हालसालैका वर्षहरूमा चिकित्सा विज्ञानको विकासका लागि धन्यवाद, चिन्ता जस्ता सर्तहरू अब ध्यान दिएका छन्। कुनै समय व्यक्तिहरू न त डाक्टरहरूले चिन्तालाई बढी महत्त्वपूर्ण समस्याहरूको गम्भीर लक्षणको रूपमा लिने गर्थे।
तर भाग्यवस, मानसिक स्वास्थ्य बेवास्ता गर्ने दिन अब समाप्त भएको छ।
अन्वेषकहरू र डाक्टरहरूले चिन्ताको समाधान पत्ता लगाउन अनन्त प्रयास गरिरहेका छन्। यसका विभिन्न सम्भावित उत्तरहरू मध्ये, क्यानाबिडिओल - सीबीडी चिन्ताको उपचारको लागि धेरै प्रतिबद्धको रूपमा देखिएको छ। यहाँ सीबीडी र कसरी सीबीडी तेल को प्रयोग गर्न सकिन्छ बिरामीहरूको बारेमा अधिक जानकारी यहाँ छ।
CBD के हो र तपाइँ चिंताको लागि CBD तेल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
CBD, Cannabidiol को लागी छोटो, क्यानाबिस प्लान्टमा फेला परेको एउटा घटक हो। विज्ञहरूले औषधीय उद्देश्यका लागि यस परिसरको विकासमा गहन नजर राखेका छन्।
यसका प्रभावहरू सम्बन्धी असंख्य रिपोर्टहरूले सुझाव दिन्छ कि CBD मिर्गी र अन्य प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूको उपचारमा फाइदाजनक छ।
धेरै व्यक्तिहरूले वाणिज्यिक सीबीडीको बारेमा कुरा गर्छन् जुन मारिजुआना र हेम्प प्लान्टहरूबाट निकाल्न सकिन्छ। चाखलाग्दो कुरा, अर्को प्राकृतिक रूप सीबीडी मानव शरीरमा उत्पादन अवस्थित छ। को मानव शरीरमा प्राकृतिक रूपमा सीबीडी उत्पादन Endocannabinoids को रूपमा परिचित छ।
यो रसायनको सम्भाव्यतालाई कसैले पनि बुझ्न सक्दछ कि विभिन्न देशका सरकारहरूले समेत अहिले सीबीडी उत्पादन गर्ने बिरुवाहरूको खेतीलाई कानुनी मान्यता दिइरहेका छन्।
गत वर्ष, ट्रम्प सरकारले हस्ताक्षर गर्दा सीबीडी उद्योगले महत्वपूर्ण धक्का प्राप्त गर्‍यो कानुनी भेडालाई कानुनी बनाउन - क्यानाबिस प्लान्टको तनाव CBD उत्पादनहरू उत्पादन गर्न प्रयोग।
सीबीडी तेलको बारेमा
सीबीडीको फाइदाजनक प्रयोग उद्धृत गर्दै, धेरै कम्पनीहरूले अब यसको उत्पादनहरू उत्पादन गर्न थालेका छन्। सीबीडी तेल, गम्मी, क्यान्डी, ट्याबलेट, र छालाको उत्पादनहरू अब प्रयोगको लागि इजाजतपत्र स्टोरहरूमा उपलब्ध छन्।
CBD लाई बाँध्न ज्ञात छ CB2 रिसेप्टर कि दुखाई प्रबन्ध। यो चिन्ता विकार को एक सम्भावित उपचार को रूप मा अनुमान गरीएको छ। सीबीडी तेलको प्रयोग बढ्दो छ यसले प्रदान गर्ने सुखदायक प्रभावहरूको कारण।
त्यहाँ बिभिन्न क्यानाबिस बिरुवाहरूबाट CBD निकाल्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्। यो धेरै स्थानहरूमा ध्यान देने योग्य छ, हेम्पबाट निकालेको सीबीडी तेल मात्र कानुनी छ किनकि यसको THC स्तर 0.3% भन्दा कम छ।
कसरी CBD चिन्ताका साथ व्यक्तिहरूको लागि काम गर्दछ?
माथि उल्लेख गरिए अनुसार CBD चिन्ता विकार भएका मानिसहरूका लागि राम्रोसँग काम गर्दछ। तर यो सीबीडी को बारे के हो जसले यसलाई त्यसो गर्न मद्दत गर्दछ?
द्वारा रिपोर्टहरू अगाडि व्यवहार न्यूरोसाइन्स सुझाव दिन्छ कि मानव प्रणालीमा फेला पारिएको सेरोटोनिनको निम्न स्तरहरू - मानिस चिन्ताबाट ग्रस्त हुनुको मुख्य कारण हो।
यस पदार्थको बढेको उत्पादनमा सुविधाले चिन्ताको स्तर कम गर्न मद्दत गर्दछ।
अध्ययन विगतमा गरिएको कुराले जनावरहरूमा सेरोटोनिनको उत्पादन बढाउन सीबीडीको सम्भावित प्रयोग देखाउँदछ।
त्यस्ता रिपोर्टहरूले सूचित गर्दछ कि CBD ले सेरोटोनिन रिसेप्टर्सहरूलाई 1a सिग्नलिंग गर्न र बिरामीहरूमा एन्टी-चिन्ता प्रभावहरू सिर्जना गर्दछ।
यद्यपि यस मुद्दामा सीबीडी प्रयोगको लागि अन्तिम प्रमाणहरू अझै काममा रहेको भनिएको छ, मानिसहरूले यसलाई देखाउँने संकेतहरूको लागि यसलाई अँगाल्न थालेका छन्।
सीबीडी तेलका उत्पादकहरूले हालको अनुसन्धानहरूमा बैंकि are गरिरहेका छन् उनीहरूको व्याकुलता विकारमा मद्दतको लागि प्रयोगको लागि। सामान्य शब्दहरुमा वर्तमानमा चिन्ताको लागि CBD तेल प्रयोग गर्ने कुनै ठोस प्रमाण छैन।
कसरी CBD तेल उपभोग गर्ने?
त्यहाँ विभिन्न माध्यमहरू छन् जुन सीबीडी तेल खपत वा लागू गर्न सकिन्छ।
यो धेरै मा प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर मानिसहरू प्राय: तेल प्रयोग गर्ने स्वादिष्ट व्यंजनहरुका लागि जान्छन्। विभिन्न विकल्पहरू मध्ये, मानिसहरू खाद्य को रूपमा सीबीडी तेल प्रयोग गर्न मन पराउँछन्। मसलादार झिंगे बाट स्वस्थ सलाद सम्म, त्यहाँ सीबीडी तेलको साथ नियमित भोजन बिचारको असंख्य तरिकाहरू छन्।
बाफिंग प्रयोग गर्ने अर्को तरिका हो यसको फाइदाहरूको लागि CBD तेल। अधिकांश vapes CBD vape तेल सहित कारतूस संग आउँछ। अनुसन्धान देखाउँदछ CBD vape तेल इनहेलिंगले शरीरलाई केहि मिनेटको कुरामा यसको 46% को रूपमा लिन मद्दत गर्दछ। व्यक्तिहरूले यसको छाला स्वास्थ्य लाभको लागि क्यानाबिडिओलबाट तेल पनि प्रयोग गर्छन्।
त्यहाँ एउटा प्रचलित गलत धारणा छ कि वाफिंगले धूम्रपान न गर्ने उच्च पाउनेछ, जुन थोरै सत्य पनि छैन। केवल पदार्थहरू जस्तै बिचरा ती THC ​​स्तरहरू माथि छन् कि एक धूम्रपानलाई बजको साथ हिट गर्नेछ। एक पटक जब मानिसहरूले यो महसुस गरे, यसले चिन्ताको लागि CBD तेल प्रयोग गर्ने बारेमा उनीहरूको विचार परिवर्तन गर्न सक्दछ।
के CBD तेल र धूम्रपान मारिजुआना उपभोक्ताले समान प्रभावहरू उत्पन्न गर्दछ?
सीबीडी तेल र धूम्रपान गर्ने भाँडाको प्रभाव बिचको प्रमुख भिन्नता भनेको यो हो कि भाँडो तपाईंलाई उच्च हुनेछ, सीबीडी तेल प्राप्त गर्दैन। चिन्ताको लागि CBD तेल प्रयोग गर्नेहरूका लागि यो के हो?
मारिजुआनासँग सीबीडी पनि हुन्छ संग THC- टेट्राहाइड्रोकाबिनोल जुन मानिसहरूलाई उच्च बनाउँन जिम्मेवार छ। त्यसोभए, मानिसहरू उच्च प्राप्तको प्राथमिक उद्देश्यका साथ यसलाई प्राप्त गर्न शक्तिशाली ताँताहरू प्रयोग गर्छन्। अरूले यसको विभिन्न स्वास्थ्य लाभहरूको लागि CBD उत्पादनहरू प्रयोग गर्छन्।
जस्तो कि सीबीडी तेलले प्रभावहरू प्रदान गर्दछ जुन डिप्रेशन र चिन्तालाई कम गर्दछ, मानिसहरूले यसलाई उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्छन्। यी तेलहरूको भाँडोमा अधिक लाभ यो छ कि मानिसहरूले यसलाई उत्पादनबाट हिटहरू नलिन यसको वास्तविक स्वास्थ्य लाभहरूको लागि प्रयोग गर्न सक्दछन्।
यो सँधै व्यक्तिगत छनौटमा आउँदछ कि उपभोक्ता भांगबाट बज लिन चाहन्छ कि चाहँदैन। दिनको अन्त्यमा के कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यो यो हो कि यस बोटसँग चिन्तासहित केही हालका असुरक्षित स्वास्थ्य समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने अनन्त सम्भावनाहरू छन्।
त्यो दिन धेरै टाढा नहुन सक्छ जब धेरै देशहरू औषधी भांग उत्पादनहरू कानुनी बनाउनको लागि आश गर्न सक्छन्।
यहाँ सीबीडी उत्पादनहरूका केही स्टकवादीहरू छन्।
इB्ल्यान्डमा सीबीडी स्टकवादीहरू
जर्मनीमा सीबीडी स्टकवादीहरू
स्कटल्याण्डमा सीबीडी स्टकवादीहरू
संयुक्त राज्य अमेरिका मा CBD Stockists
भांगले केही व्यक्तिको लागि मानसिक स्वास्थ्य जोखिम लिन सक्छ। त्यसोभए तपाईंले CBD तेल प्रयोग गर्न सुरू गर्नु अघि, कृपया आफ्नो अनुसन्धान गर्नुहोस्। तपाईको शारीरिक र मानसिक सुस्वास्थ्यलाई असर नपार्नको लागि तपाईको चिकित्सक वा उपयुक्त विशेषज्ञसँग सल्लाह लिनुहोस्।
पछिल्लोकिन Assertive हुनु महत्त्वपूर्ण छ र कसरी Assertiशीलता सुधार गर्न को लागी
अर्को13 नमूना प्रश्नहरू केयर सहायक साक्षात्कार पास गर्न मद्दत गर्न
4 केमोथेरापीको बखत भांग लिने फाइदा
अक्टोबर 29, 2019
सीबीडी तेल - चिकित्सा भांग तेल कत्तिको प्रभावकारी छ?